भर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारको यस्तो निर्णय, सबैतिर छायो खुशीयाली !Pm Kp Sharma Oli cabinet meeting. -
Home News भर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारको यस्तो निर्णय, सबैतिर छायो खुशीयाली !Pm Kp Sharma Oli...
भर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारको यस्तो निर्णय, सबैतिर छायो खुशीयाली !Pm Kp Sharma Oli cabinet meeting.
नेपालमा पहिलो पटक ब्यवसायीक नर्स प्रशिक्षक र प्राध्यापकहरुवाट नर्सिङ सेवाका लागि पूर्व तयारी कक्षा सुरु भएको छ । नर्सिङ सेवामा लामो समय देखि लागेका अनुभवीहरुले यस्तो काम थालेका हुन् ।
नर्सिङमा गुणस्तर बढाउन र नर्सिङ लाइसेन्सको परिक्षामा अत्याधिक सफल नतिजा ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रशन्न इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा लि ले नेपालमै पहिलो पटक पूर्व तयारी कक्षा संचालन गरेको हो । काठमाडौको सातदोवाटोमा उद्घाटन गरिएको तयारी कक्षामा उल्लेख्य नर्स र स्वास्थ्य सेवामा लागेकाहरुको सहभागीता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
Previous articleभर्खरै हेर्नुस पहिलो पटक मिडियामा! लाहुरे राहुल र स्मिताको मिलनपछि सन्तोष दाइलाई के भयो यस्तो Lahure
Next articleमध्यराति दलहरुलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको यस्तो चेता*वनी, खै*लाबैला म*च्चियो Gyanendra Shah